နျူကလီးယား သဘောတူညီချက်မှ အမေရိကန် နုတ်ထွက်သော်လည်း အီရန်နှင့် ဆက်လက် ကုန်သွယ်မည်ဟု ဥရောပ?? - Yangon Media Group
တီဟီရန်၊ မေ ၁၉
နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်မှ အမေရိကန်နုတ်ထွက်သွားသော်လည်း အီရန်နှင့်ဆက်လက်ကုန်သွယ်သွားမည်ဟု ဥရောပသမဂ္ဂက နှစ်သိမ့်ပြောကြားလိုက်ကြောင်း မေ ၁၉ ရက် ရိုက်တာသတင်းကဆိုသည်။ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်သည် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် အီရန်နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်မှ နုတ်ထွက်ကာ အီရန်အပေါ် ဆန်ရှင်များပြန်လည်ချမှတ်မည်ဟု ပြောဆိုထားသည်။ ထို့ကြောင့် အီရန်အစိုးရ၏ အဓိကဝင် ငွေဖြစ်သော ရေနံတင်ပို့ရောင်းချမှုမှာလည်း ပိတ်ပင်ခံရ ဖွယ်ရှိနေသည်။
သို့သော် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ စွမ်းအင်နှင့် ရာသီဥတု ရေးရာကော်မရှင်နာမင်းကြီးသည် အီရန်အစိုးရဝန်ကြီး ငါးဦးနှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် ဥရောပသမဂ္ဂအနေဖြင့် အီရန်နှင့် ဆက်လက်ကုန်သွယ်ရန်၊ အီရန်ထံမှ ရေနံများဆက်လက်ဝယ်ယူရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း နှစ်သိမ့်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်နှင့် ဗြိတိန်တို့ဦးဆောင်သော ဥရောပ သမဂ္ဂသည် နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်ကို ဆက်လက် ထောက်ခံနေဆဲဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နုတ်ထွက်သွား သော်လည်း သဘောတူညီချက် မပျက်ပြားစေရန် ကြိုးစား နေကြသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူများကမူ မိမိတို့အနေဖြင့် အီရန်ကို အမေရိကန်ဆန်ရှင်များ၏ဒဏ်မှ များစွာအကာ အကွယ်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ အမေရိကန်ဆန်ရှင်များ ပြန်လည်တည်ရှိလာပါက ဥရောပကုမ္ပဏီများသည် အီရန်ကို စွန့်ခွာကြဖွယ်ရှိကြောင်း သုံးသပ်ပြောကြားသည်။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် အီရန်နှင့် ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံများသည် နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့ သည်။ ထိုစာချုပ်အရ အီရန်သည် နျူကလီးယားအစီအစဉ်များကို ရပ်တန့်ပေးခဲ့သလို အမေရိကန်ဦးဆောင်သော အနောက်နိုင်ငံများကလည်း ဆန်ရှင်များအားရုပ်သိမ်းပေး နိုင်ခဲ့သည်။
ဗင်နီဇွဲလား နိုင်ငံပိုင် ရေနံကုမ္ပဏီကို အမေရိကန် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့
ပွဲကြည့်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရသော်လည်း တခြားနည်းလမ်းဖြင့် ကြည့်ရှုခဲ့သည့် ဒီနစ်ဇ်လီစပေါအသင်??